PHOTO ။ အန်သိုနီ Delon တစ် rant တွန်း: "ငါမခံမရပ်နိုင် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "PHOTO ။ အန်သိုနီ Delon တစ် rant တွန်း: "ငါခံမရပ်နိုင်
အန်သိုနီ Delon pissed ခဲ့သည်! မိမိပရိတ်သတ်တွေသိရန်တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပေ။ အပေါ် posted အနည်းဆုံးငွေသားတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုတစျဆငျ့ Instagram ကိုသား၏Alain Delonသောကြီးမား rant တွန်းအားပေး, တနင်္လာနေ့ 30 စက်တင်ဘာလအပေါ်သူ၏မွေးနေ့ဆင်နွှဲကြလိမ့်မည်, နှင့်ဇွန်း၏နောက်ကျောနှင့်အတူလိုက်မသွားဘူး: "ငါ့ 55 ချောင်း၏အရုဏ်မှာငါခံမရပ်နိုင်ရာတစျခုသောဘောလုံး outta ဖြစ်ပါတယ် '' s ကိုရှိပါလျှင်" သူသည်ဤ hashtags ကိုနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်, ရေးသားခဲ့သည်: "#maisalorsplusdutout #quotesaboutlife moulinsavents # # # baltringues စသည်တို့ ... " ။ ဤစကားသည်ကမ်းခြေမှာရေထဲကအရာပေါ်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့နွေရာသီဓာတ်ပုံတစ်ပုံ, ဿုံ Sculpt ကိုယ်ထည်နှင့်အတူလိုက်ပါ။ အပန်းဖြေ exudes သောရုပ်ပုံလွှာ။
ဤ remark အများအပြားအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ရုပ်တုနှင့်အတူညှိအတွက်သိသိသာသာတုံ့ပြန်: "ကျနော်တို့အားလုံးသဘောတူ !!!! သူတောင်းစားပဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ဂရုစိုက်နိုင်လျှင်အများကြီးပိုကောင်းသွားပါလိမ့်မယ် !!! နေ့သည်ကောင်းသော "," သင်ဟာ Darling ပါစေပါဘူး "," ငါ့ကိုက 40 ဖို့ကျွန်မကိုခေါ်သွားတယ်။ J ကိုနောက်ဆုံးမှာမြည်းအတွက်နာကျင်မှုမှ shit ပြောမလျှောက်ဝံ့ကြ။ ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရကတည်းက။ ယခုတွင်ငါသည်အနှစ် 51 နဲ့အလင်း, အလင်းခံစားရတယ် ... " ကျနော်တို့မှတ်ချက်တွေကနေဖတ်ပါ။
ငါ၏အ 55 ချောင်း၏အရုဏ်မှာငါခံမရပ်နိုင်အဲဒီမှာ '' s ကိုတဦးတည်းအရာသည်ငါ့ဘောလုံးခြိုးဖောကျသောကွောငျ့ဖွစျသညျလျှင်။ #maisalorsplusdutout #quotesaboutlife moulinsavents # # # baltringues စသည်တို့ ...
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို အန်သိုနီ Delon (@Therealanthonydelon) ဖြစ်ပါသည် စက်တင်ဘာ 11, 2019 မှာ 12: 38am PDT ရန်ကုန်
အန်သိုနီ Delon လမ်းကူး တစ်ဦးရှုပ်ထွေးကာလ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကတည်းကသူ၏ဖခင်, သုံးလေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက် haemorrhage ခံစားခဲ့ရသည် ဆေးရုံတင်။ သူသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လအတွက် 10 11 ၏ညဥ့်အပေါ်ကိုသနားSalpêtrièreပြောင်းရွှေ့ခံရပြီးနောက် "ကျိန်းဝပ်" ဆေးခန်း Genolier, ဆွစ်ဇာလန်။ မိမိသမီး၏ရွေးချယ်မှု, Anouchka Delon, အရာ နှစျသား ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။